Badminton : tafapetraka ny « Shuttle Time » | NewsMada
Badminton : tafapetraka ny « Shuttle Time »
Fampandrosoana no tanjona. Ankehitriny, efa tafapetraka eto Madagasikara ny vinavina na fandaharan’asa “Shuttle Time” eo amin’ny taranja badminton. Vinavinan’asa avy amin’ny kaonfederasiona afrikanin’ny badminton izy io.
Raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny federasiona malagasy (Fmbad), badminton atao eny an-tsekoly ny “Shuttle Time”. Izany hoe, tafiditra indrindra amin’ny fandaharam-pianarana eo amin’ny fanatanjahantena an-tsekoly. Tafiditra amin’ireo firenena 18 aty Afrika nametrahan’ny kaonfederasiona afrikanina io vina io, i Madagasikara. Araka izany, efa mahatratra eo amin’ny 10 mahery eo izao ireo sekoly efa nametrahan’ny federasiona malagasy io fandaharan’asa iray ho fampandrosoana sy fampiroboroboana ny taranja badminton io.
Tanjona kosa ny mba hahafahan’ireo ankizy mivelatra eo amin’ny taranja. Eo ihany koa ny hisarihana ireo ankizy hitia sy hanao fanatanjahantena, sns. Voalaza fa efa maro ireo ankizy voasarika amin’ity taranja ity.